CHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Matatu Matanho Co-extruder Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Matatu Matanho Co-extruder Line
Nguva: 2018-04-18 Hits:
Suzhou JWELL Machinery Co., Ltd icharatidza PVC Matatu matatu co-extruder pombi mutsetse muH6.1D65 dumba, uchitarisira kushanya kwako
Mutsetse waishandisa maviri seti inoshanda SJZ conical extruders kuita matatu dura rePVC pombi. Iyo yepakati layer yakashandisa PVC + yakakwira-calcium kana PVC inopupuma fuma.
Iyo extruder yakashandisa JWELL Ultra-inopfeka-isingagadzirise chiwanikwa sikuru uye dhiramu; Yakashandiswa twin-screw feeder ine yekudyisa kugadzikana uye anti-poda bhiriji. Yekutenderera gungano giya bhokisi rinogadziridza iyo inotonhorera chirongwa cheiyo gearbox, uye iko kwese tembiricha yeiyo gearbox yakatomboita mo
ptimized dhizaini yePVC nhatu-rukoko muforoma, iine kutaridzika kwekudzivirira uye anti-perm dziviriro; Iyo yekuyerera yekuyerera nzira yakakwenenzverwa zvakanyanya ne chrome yakanamirwa pamifananidzo, pfeka nemishonga uye ngura nemishonga; Zviri nyore kubvisa uye
Matatu-danho rekutsiva tangi, yakazvimiririra frequency kudzora, vacuum degree isina kujairika alarm; Multi-nzwara kutakura-kure unit, servo drive mota, kuverengera yakakwira traction simba kugadzikana kugadzirwa, hapana induction uye hapana skidding.
Muchina wekucheka unotora michina yekuchinjisa michina kuti igadzirise kune akasiyana mapaipi dhayamita uye udzivise dambudziko rekutsiviwa kwakawanda kwezvisungo. Yakashongedzerwa neyakagadziridzwa ichiyangarara chamfering mashandiro, inogona kugadzirisa saizi yekumusoro zvichienderana nehukuru hwepombi dhayamita uye rusvingo ukobvu. Yakavharwa suction mudziyo, mhedzisiro iri nani.
Chinofambiswa murume-muchina interactive kunyaradzana, wakakwana mutsetse PLC centralized kuzvidzora, vakapakata simba rakawanda rakawanda kuratidza mita.
Izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa mukati mepakati pekupupa fani yekudonhedza pombi ine yakakwira chipingamupinyi ruzha, iyo inopupuma yepakati dura pombi nemitsara inonamira yemukati emadziro ne
Wedzera: NO. 18, Dong mugwagwa, Chengxiang Industrial Zone, Taicang, Suzhou City, China
KUMASHURECHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- LVT Nyowani Composite Floor Extrusion Line
NEXTCHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Inokurumidza Kuunganidza Bhodhi Extrusion Line